लडाकु व्यवस्थापन गर्दा एक रुपैयाँपनि भ्रष्टाचार भएको छैन, अख्तियारले छानबिन गरोस : वर्षमान पुन (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
लडाकु व्यवस्थापन गर्दा एक रुपैयाँपनि भ्रष्टाचार भएको छैन, अख्तियारले छानबिन गरोस : वर्षमान पुन (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2021 March 22, 11:12 pm
पत्रकार धमलाले तर तपाईँलाई त थाहा छ नि प्रचण्डमाथि अरबौंको आरोप लागेको छ भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता पुनले तत्काल जवाफ फर्काए-“केही पनि लागेको छैन् । के आरोप छ ?” पत्रकार धमलाले फेरि सोधे-“मन्त्रीहरुले भनेका छन्, नेत्रविक्रम चन्दले पनि त्यत्रो पैसाहरु कहाँ गए ? प्रचण्डले कहाँ राख्नुभएको छ ? लडाकुको पैसाहरुको कुरा उठाउनुभएको छ नि ?” जवाफमा पुनले भने-“कुन चाहीँ पैसा, लडाकुको कुन पैसा छ ? राज्यसँग प्रचण्डले कहाँ पैसा लिए ? ३२ हजार पहिले क्यान्टोनमेन्टमा थिए, भेरिफिकेशन हुँदा १९ हजार पुग्यो । अयोग्य लडाकुहरु, बहिगर्मित लडाकुहरु भित्र बस्नुभयो । उहाँहरुले महिनाको पहिला तीन हजार थियो, सायद पछि पाँच हजार पकेट खर्च पाउँथ्यो, ईण्डिभिज्वल सबैले बुझेको छ । कसरी त्यहाँ प्रचण्ड जोडिन्छ ? कुन चाहीँ लडाकुले आरोप लगाए । मै हुँ त प्रचण्डपछिको लडाकु हो । १९ अर्बको कुरा त, महेश बस्नेतहरुले माओवादीप्रतिको प्रतिशोध साँधेको हो । झण्डै सात आठ वर्ष भयो, किन अनुशन्धान नगरेको त ? फाईल कहीँ पनि छैन् । यो सबै गफ हो ।”
तर, टोपबहादुर रायमाझीले नै यो विषय उठाउनु भएको छ नि भन्ने अर्को प्रश्न गर्दा पूर्वमन्त्री पुनले भने-“टोपबहादुर रायमाझी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त अहिलेसम्म ? त्यसो भए उहाँले लिएर खानुभएको होला नि, म एकद कुल माईण्ड लिएर के भन्छु भने सबै प्रचण्डमाथिको प्रतिशोध हो । एक पैसापनि माओवादी पार्टीले चलाएको छैन् । कसरी पार्टीले चलाउँछ ? सबै यो भ्रम छ नि । प्रचण्डमाथि अन्याय भएको छ ।” उनले यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरोस भन्ने माग पनि गरे । अहिलेसम्म किन छानबिन नगरेको भन्दै उनले आफूहरु तयार रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।